မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: လွန်တာရှိရင် ၀န္တာမိပါ...
ဒီနေ့ အလုပ်ရောက်တော့ လုပ်စရာကမရှိ.. အလုပ်မလုပ်ပြန်တော့လဲ စီးပွားရေးက မကောင်းလို့ အလုပ်သမားလျော့တဲ့ထဲ ပါသွားမှာက ကြောက်ရသေး.... ဘယ်သူ့အပြစ်တင်ရမှန်းကို မသိဘူး... Mood က တွေ့သမျှအကုန် ရမ်းချင်နေတယ်.. ဟီး.. ဟီး.... ထွက်မပြေးပါနဲ့.. ဆက်ဖက်ပါ...
ဒီလိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ TommyGirl နဲ့တွေ့လို့ စကားပြောရင်း.. သူနဲ့ကိုယ်ကလဲ ၀ါသနာတူတော့ ရုပ်ရှင် အကြောင်းပြောဖြစ်တာများတယ်.. ဒါနဲ့ သူ့ဘလော့က cello vs cello remake ပိုစ့်အကြောင်းရောက်သွားတယ်.. မဗေဒါလဲ သူ့ပိုစ့်ဖတ်ပြီးတော့ အဲဒိ ကြိုးအော်သံဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားကို ခိုးချထားတဲ့ ကားကိုသွားကြည့်လိုက်သေးတယ်.. တမင် အဲဒိနေ့က အားနေလို့.. ရီချင်လို့ကိုသွားကြည့်တာ... မူရင်းကားတော့ မကြည့်ရသေးပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားကားရိုက်ချက်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတော့ ကြည့်နေကျ ဆိုတော့ မှန်းလို့ရပါတယ်... ကိုရီးယားသရဲကားကိုတော့ ခုတလော မဗေဒါအသည်းငယ်နေလို့ မကြည့်ပါဘူး.. မြန်မာသရဲကိုတော့ ရီရမယ်မှန်းသိလို့ ကြည့်တာပါ.. ဥပမာ ကုတင် ခြေရင်းကနေ စောင်ကို ဆွဲချတဲ့ အခန်းဆို နိုင်ငံတကာ သရဲကားတော်တော်များများမှာပါပါတယ်.. အဲဒိ မြန်မာပြန်ရိုက် ကြိုးအော်သံမှာလဲ ပါပါတယ်.. စောင်က အောက်လျောပြီး သရဲက စောင်ထဲကတက်လာပါတယ်... ပြီးတော့ သရဲ(နေဆန်း) က အထီးပါ... ခြောက်ခံရတဲ့ လူမင်း(မင်းသား)ကလဲ ယောကျာင်္းပါ.. ပြီးတော့ ဘွားဆိုပြီး နေဆန်းမျက်နှာကို အနီးကပ်ရိုက်လိုက်တယ်.. ဒါပါပဲ.. အဲလိုအခန်းမျိုးတစ်ပုံစံထဲ Thailand shutter သရဲကားမှာပါပါတယ်.. စောင်ကအောက်ကိုလျောလျောလာပြီး ခြေရင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ သရဲမက ကတင်အောက်ကနေတွယ်တက်လာတာကို တကယ်ကျက်သရေတုံးတုံးရိုက်ပြသွားနိုင်ပါတယ်.. ကျမဖြင့်ကြောက်လွန်းလို့.. ညအိပ်ရင် စောင်ကို သေချာထုတ်ပြီးမှအိပ်တဲ့အထိပဲ...
ပြီးတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းခိုးတာက ထားပါတော့ (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင်တော့ ပြန်ရိုက်ကားပေါ့) ပိုစတာလောက်တော့ ကိုယ့် အိုင်ဒီယာနဲ့ကိုယ်ရိုက်ကြပါလား... မဟုတ်ဘူး.. ပိုစတာ ဒီဇိုင်းကအစခိုးတယ်... သူများလိုမှီအောင်ကျလိုက်မလုပ်နိုင်ဘူး... အဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့သိပ်မဆိုင်ပဲ တစ်ခုတိုးတက်လာတာတော့ရှိတယ်...နန္ဒာလှိုင်အပြင်မသွားခင်ဖြစ်ဖြစ်.. လူမင်းအပြင်မသွားခင်ဖြစ်ဖြစ်.. နမ်းပြီးမှသွားတာ.... ဒါမျိုးကျတော့ သူတို့လိုက်လုပ်ချင်တယ်.. ကျန်တာကို မြန်မာကားမို့ နားလည်ပြီးကြည့်ပေးပါ.. ဖြည့်ကြည့်ပေးလို့ရတယ်... ခုတော့ ပါတိတ်ထမီဝတ်ပြီး သူု့ကိုယ်သူ မြန်မာဆန်ပြနေတဲ့ မင်းသမီး.. ဇာတ်လမ်းနဲ့လဲ အဓိကမကျတဲ့ အခန်းမျိုးတွေကျတော့ရော ရိုက်သင့်သလား.. ဇာတ်လမ်းအရ လင်မယားမို့ ရင်းနှီးကြောင်းပြချင်တယ်ဆိုလဲ တခြားနည်းနဲ့ပြလို့ရတယ်.. ဒါမှမဟုတ် နမ်းချင်ရင်လဲ အသက်ပါပါသရုပ်ဆောင်ကြပေါ့....
ခေတ်နဲ့ အညီမို့ နမ်းခန်းမထည့်ရဘူး မပြောပါဘူး.. ခုခေတ်မှာ မင်းသမီးတွေ ဒိထက်ဆိုးတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေတောင် နာမည်ကြီးချင်ဇောနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေနေကြတာ.. ဒါပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပရိတ်သတ်ကို မစော်ကားနဲ့.. သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်ပေါ်အောင်လုပ်... နမ်းခန်းလေးရိုက်ရတာကို အရသာခံနေတဲ့ ရုပ်တွေနဲ့... လင်မယားနဲ့တူအောင် သရုပ်မဆောင်ဘူး.. နမ်းရတာကို အရသာခံနေကြတယ်.. အဲဒါကိုပြောချင်တာ.. စာဖတ်သူ သဘောပေါက်မလားတော့ မသိဘူး.. ကျမပြောချင်တာကို...
အဲကားဆုံးတော့ ရိုက်တာတွေတော့ ပြန်ပြပါတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ... မြန်မာပြည်လို ပစ္စည်းလုံလောက်မှုမရှိ ရုံးဘက်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုမရှိ.. ဘက်ဂျပ်ကမရှိ... ပရိသတ်ကမရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကအတွက်.. သူတို့ အားတော့ စိုက်ထုတ်ပါတယ်... အဲမှာ စဉ်းစားမိတာ... တကယ်ကို quality ကောင်းတဲ့ မူရင်းဖန်တီးရှင်တွေဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် အပင်ပန်းခံခဲ့ကြမလဲလို့... ပြန်ရိုက်တဲ့ လူမင်းရော.. ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးမှ ပရိတ်သတ်က အဲလိုပြောတာခံရတော့ စိတ်ကောင်းပါ့မလား.. အပင်ပန်းခံပြီးမှတော့ အားနဲနဲပိုစိုက်ထုတ်ပြီး ပိုကောင်းအောင် မတီထွင်သင့်ဘူးလား.. သိပ်မပြောချင်ပါဘူး.. မြန်မာပြည်အကြောင်းလဲ သိတော့ မြန်မာပြည်က အနုပညာသမားတွေကိုလဲ သနားပါတယ်.. ဒါပေမဲ့..... ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်........
အဲ.. အပေါ်မှာပြောသွားတာက မမှီ့တမှီခိုးချတဲ့ သရဲကား... နောက်တစ်ကား.. ကျမရှာတွေ့ထားတာရှိသေးတယ်... လူမင်းပဲ.. အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့.. ၀ိညာဉ်လိပ်ပြာ တဲ့ အင်္ဂလိပ်ကား Dragonfly ကို ခိုးချ.. (အဲလေ).. ပြန်ရိုက်ထားတာ... မူရင်းကားက မင်းသား မင်းသမီး အဖိုးကြီးတွေဆိုပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ.. လူမင်းများတော်တာ တကယ်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အတိုင်းပဲ... ဆေးရုံကတော့ တော်တော်သားသားနားနားပါပဲ... ဘယ်ဆေးရုံလဲသိဘူး.. သူငယ်ချင်းတယောက်တော့ပြောတယ်.. မေ့သွားပြီ.. အဲမှာ.. လူမင်းက ခိုးချ... (အဲလေ.. ဒီလက်ကလဲ...) ပြန်ရိုက် ကားတွေမှာတော့.. တော်တော်ကြိုးစားပမ်းစား.. ခိုးချ.. (အာ.... လက်ကလဲ ရိုက်မိပြန်ပြီ...) ပြန်ရိုက်ထားပါတယ်.. ခက်တာက လိုက်မမှီတာပဲရှိပါတယ်...
ထားလိုက်ပါတော့.. သရဲကားတွေလိုက်မမှီတာကို.. မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ အရင်က အချစ်ကလွဲလို့ ဘာမှရိုက်ခွင့်မရှိခင်ထဲက အချစ်ကို လက်သုတ်စုံလာတာ.. ခု မျက်စိပွင့်နားပွင့် သူများနိုင်ငံက ကားတွေကြည့်ရတော့.. အချစ်ကားတောင် မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ကောင်းကောင်းမရိုက်နိုင်ကြတော့ဘူး.. သရုပ်ဆောင်ပိုင်း.. အသံပိုင်း.. စက်ပစ္စည်းပိုင်း.. အားလုံး သူများတွေကို လိုက်မမှီရတဲ့အထဲ.. အချစ်ကားဇာတ်လမ်းတောင် သူများဆီက ခိုးချ.. (အဲ).. ပြန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့.. ဒါဟာ တော်တော် impression down စရာဖြစ်လာပါတယ်.. မဗေဒါပဲ အသားထဲကလောက်ဖြစ်ပြီး.. ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် အထင်သေးနေတယ်လို့ထင်နေကြပြီလား... မဟုတ်ပါဘူး.. ဖြစ်စေချင်တာပါ.. ဖြစ်စေချင်လွန်းတာပါ.. မဖြစ်တော့ စိတ်ပျက်မိတာ....
မဒီဂျွန်ရဲ့ ဖီလင်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို TommyGirl ပြောလို့သွားဖတ်ဖြစ်တော့.. သူနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ မခံချိမခံသာဖြစ်ရပါတယ်.. Sorry! I love you ဆိုတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကျမတစ်ဝက်ထိကြည့်ဖူးပါတယ်.. ဇာတ်သိမ်းက ၀မ်းနည်းစရာမို့ ဆက်မကြည့်တော့တာပါ.. အဲဒိကားကိုလဲ ပြန်ရိုက်တယ်...
My Tutor Friend လို ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ကားကိုလဲ ပြန်ရိုက်တယ်.. ကျမ မြန်မာကားတွေ မကြည့်ရသေးပင်မဲ့.. မူရင်းကိုရီးယားကားတွေ တော်တော်များများကြည့်ဖူးပါတယ်..100 days with Mr Arrogant, My Sassy Girl, Turn left Turn right ပြောရင်ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါတောင် ကျမတို့ တွေ့ရှိသလောက်ပါ..
"Love me not" ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားဆိုရင် တော်တော်ကောင်းတာပါ... TommyGirl ပြောလို့ နေကြတ်ချိန် ဆိုတဲ့ နေတိုးနဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဟာကိုကြည့်ဖြစ်တော့.. စိုးပြည့်သဇင် သရုပ်ဆောင်တာ အဲဒိကားရိုက်ပြီး လိပ်ခေါင်းများထွက်သွားပြီလားလို့ ထင်မိပါတယ်.. ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်ကုန်းကုန်းအော်နေတာ.. မြန်မာကား အသံဖမ်းက ကောင်းကောင်းဆိုတော့ အသံကျယ်ရင် အရမ်းကျယ်.. တိုးတော့ တအားတိုး.. တီးလုံးကကျယ်.. လူသံကတိုးလို့ အားစိုက်နားထောင်တဲ့ အချိန်မှ.. စိုးပြည့်သဇင်က ကုန်းအော်.. ဒီအချစ်ကားကမှ သူ့ကိုကြည့်ပြီး သရဲကားနဲ့တူသေးတယ်.. မျက်စိကန်းပြီး စိတ်တိုနေတတ်တဲ့ သူဋ္ဌေးမြေးမလေး အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တာ ငါးစိမ်းသည်နဲ့ နင်လားငါလားပါပဲ.. ကိုရီယားကို အထင်ကြီးလွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့.. ကွာတယ်ဆိုတာပဲပြောချင်ပါတယ်... အွန်စောငယ်ဘ၀ကို သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီးလေး Love me Not မှာသရုပ်ဆောင်ထားတာပါ.. တော်တော်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်..
နောက်တစ်ကားရှိသေးတယ်.. ကျမရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ပါ.. တွေ့တာကြာပြီ.. သိပ်မပြောချင်လို့ မရေးတာ.. ကိုယ်ကလဲ ဘာကောင်မှမဟုတ်တော့.. ကိုယ့်ထက်တတ်တဲ့ အနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေကို သိပ်မဝေဖန်ချင်ဘူး... 18 Vs 29 ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဟာသ ဇာတ်လမ်းတွဲကနေ နဲနဲခိုးချပြီးရိုက်ထားတာ... လွင်မိုးနဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို.. "အချစ်မှာ အပြစ်မရှိပါ" တဲ့... အဲဒိမြန်မာကား ၃ ၄ခန်းပြပြီးတာနဲ့.. ခိုးချထားမှန်းသိတယ်... ခင်ပွန်းနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး ကားမောင်းထွက်လာရင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁နှစ်ကျော်ထိပဲ မှတ်မိတော့တာ.. သူ့ကိုယ်သူ အသက် ၁၈နှစ်လိုထင်နေတာ.. သူ့ယောင်္ကျားကိုမမှတ်မိတော့တာ.. သူ့အမေဆုံးသွားပြီဆိုတာကို မေ့သွားတာ.. အားလုံးခိုးချထားတာတူတူပဲ.. အဲဒိကားမှာ မူရင်းကိုရီးယားမင်းသမီးကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ သူသရုပ်ဆောင်တာ တကယ် ၁၈နှစ်သမီးလို ပေါ့ပါးတယ်.. အသက်ဝင်တယ်.. ရီရတယ်... ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလို ၀ါရင့် သရုပ်ဆောင်ကို ကျမကြိုက်ပါတယ်.. သူမ အရင်က သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆို တော်တော်ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမြန်မာကားတွေက ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်လာတာလဲမပြောနဲ့.. ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေကတောင် ပေါ့ပျက်ပျက်သရုပ်ဆောင်လာတယ်.. ဆားမပါတဲ့ ဟင်းစားရသလိုပဲ.. အရင်ခေတ်က ရုပ်ရှင်တွေက တကယ်ပဲကောင်းခဲ့တာလား.. ခိုးချထားတာကို ကျမပဲ မသိတာလားတော့မသိဘူး.. အနည်းဆုံး မြန်မာသရုပ်ဆောင်တွေကကောင်းသေးတယ်...
နောက် ရှိသေးတယ်.. " တစ္ဆေတစ်ကောင်း၏အငြိုး" ဝေဋ္ဌုကျော်နဲ့ သဇင်ပါ.. English နာမည်ကြီး လူသတ်ကား "I know what u did last summer" ကိုပြန်ရိုက်ထားတာပါ.. စစချင်း ဝေဋ္ဌုကျော်က ကားတိုက်ခံရတဲ့ သူနေရာကမို့ ကျမတောင် ကြောင်သွားပါသေးတယ်.. မြန်မာကားမှာ မင်းသားကို လူဆိုးနေရာထားတာ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါပေါ့... သဇင့်ဘဲက ကားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့သူပါ... အဲဒိထိအားလုံးတူပါတယ်.. အဲ လိုက်သတ်တဲ့ အခန်းတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း.. ကလေးတူတူပုန်းတမ်းကစားသလောက်တောင် ရင်ခုန်ဖို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်.. စာတွေလာတယ်..English ကားမှာ " I know what u did last summer " ဆိုပြီးရေးထားတယ်.. မြန်မာကားကျတော့ " မင်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ငါသိတယ်" တဲ့.. ဟီး.. ဟီး.. အဲဒိစာကြီးတွေ့တော့ ကျမဖြင့် ရီလိုက်ရတာ အူကိုနာနေတာပဲ... ခိုးချတာတော့ ခိုးချပါ မြန်မာမှုပြုသင့်တဲ့နေရာပြုပေါ့... တခြားနည်းနဲ့ ချိန်းခြောက်ချင်လဲ ချိန်းခြောက်ပေါ့.. တစ်ကွက် ၂ကွက် ကိုယ့်ဦးနှောက်သုံးလိုက်ရတာ ဒီလောက်မပင်ပန်းပါဘူး... အဲ.. မြန်မာမှု မပြုသင့်တဲ့ နေရာကို ပြုတာရှိသေးတယ်ဗျာ့.... နောက်ဆုံးခန်းကျတော့ လူသတ်သမားက ဝေဋ္ဌုကျော်မဟုတ်ပဲ.. (မြန်မာကားတွင် မင်းသားသည် ဘယ်တော့မှ လူဆိုးမဖြစ်).. သဇင့်ရည်းစား ကားနဲ့တိုက်တဲ့ကောင်က လူဆိုးဖြစ်နေတယ်.. မြန်မာအဆန်ဆုံးပြကွက်ကတော့.. နောက်ဆုံးခန်းမှာ...ဒန် တန်တန်တန် ဆိုပြီး.. "မင်းတို့အားလုံးကို ပြည့်သူ့ဝိုင်းတွေ ရဲနေကြပြီ" ဆိုပြီး ပြီးသွားတော့တာပါပဲ... ဟား... ဟား.....
အင်္ဂလိပ်ကား Cellulor ကို လူမင်း မို့မို့မြင့်အောင် ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ "ဆယ်လူလာ" ဆိုတဲ့ကားရှိတယ်... မင်းသမီးက လူဆိုးတွေဖမ်းထားတဲ့ အခန်းထဲကနေ ဖုန်းနဲ့ အပြင်က မင်းသားကို ဆက်သွယ်တဲ့ action ကားလေး.. အင်္ဂလိပ်ကားကတော့ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်.. မြန်မာကားလဲ ကောင်းတယ်.. ရီဖို့... ဘယ့်နဲ့.. ဆယ်လူလာဆိုပြီး လူမင်းတစ်ယောက်နားမှာတပ်ထားတာကြီးက ကွန်ပြူတာမှာသုံးတဲ့ မိုက်နဲ့ နားကျပ်သေးသေးကောက်ကောက်လေးလေ.. သိလားတော့မသိဘူး.. မသိတာကျနေတာပဲ.. Bluetooth လိုလိုဘာလိုလိုပေါ့.. ဒါဆိုလဲ Bluetooth နားကျပ်စစ်စစ်နဲ့ပဲ သရုပ်ဆောင်လိုက်ပါလား... မြန်မာပြည်ကလူတွေကို မသိဘူးများအောင့်မေ့နေလားမသိ... (ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. Rဇာနည်ကလဲ ဗွီစီဒီတစ်ခုထဲမှာ Bluetooth ကြီးနားမှာတပ်ပြီ သီချင်းဆိုသဗျ.. ဆိုနေတုန်း ဖုန်းလာရင် ဖြေဖို့ထင်ပါ့.. ဟား.. ဟား.. ) အင်္ဂလိပ်ကားက မင်းသားတောင် ဖုန်းကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး နားမှာကပ်ပြီး တစ်ကားလုံး သရုပ်ဆောင်သွားတယ်.. သူက ပိုသဲကဲ ခေတ်မှီကြောင်းကြွားပြလိုက်သေးတယ်.. ဟား.. ဟား.. ပြောရင်း မြင်ယောင် ပြီး ရီချင်လာပြီ.......... lol....
ပြောရမယ်ဆိုရှိသေးတယ်.... ဟိုးအရင်က ကား... ဒွေး+ ထက်ထက်မိုးဦး+စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ "ရင်ထဲမှာဘာညာဘာညာ " ဆိုတာ.. ကုလားကား.. ရှာရွတ်ခန်ရဲ့ "Kuch Kuch Hota Hai" ဆိုတဲ့ကားကို ပြန်ရိုက်ထားတာ.. အများကြီးပဲ.... ခုလောလောဆယ်ဒိလောက်ပဲမှတ်မိတယ်.. ဒါတောင် မြန်မာကားတွေ ကြည့်တာရပ်လိုက်လို့.. ဆက်ကြည့်ရင် ထပ်တွေ့အုံးမှာပဲ.. ပုဂံဘုရားတွေကို တင်စားသလို လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ဘုရားရှိသလို့.. မကြည့်လိုက်နဲ့.. ကြည့်လိုက်လို့ ဇာတ်လမ်းများ နဲနဲကောင်းရင် No Doubt ခိုးချ..အဲ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင် ပြန်ရိုက်တွေချည်းပဲ....
ကျမပြောချင်တာက တစ်ချို့ကိုရီယားကား ကောင်းကောင်းလေးတွေဆိုရင် သူတို့ ကိုရီးယားဖိုရမ်တွေထဲက ၀ါသနာရှင်လေးတွေရေးထားတာကို ပုံဖော်ဆေးရောင်ခြယ်လိုက်တာပါ... ဒီလိုနဲ့ နာမည်ကြီးကားတွေဖြစ်လာတာပါပဲ... ခုဆို မြန်မာဘလော့တွေမှာလဲ တချို့ဆို ရသမြောက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရှိနေတာပဲ.. ရိုက်ကျပါလား.. စာရေးသူက ၀ါသနာရှင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနုပညာဖိုးလဲ များများပေးစရာမလိုပါဘူး.. Credits ပေးရင်တောင် ကျမဆိုကျေနပ်တယ်.. ဟိုတစ်လောက မနိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ ဘလော့ပေါ်က ၀တ္တုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မဲ့သတင်းကြားတော့ ကျေနပ်မိပါတယ်.. သူများဇာတ်လမ်းတွေကူးမဲ့အစား.. ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး.. ကိုယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလောက်ထဲကနေ.. အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သွားလို့ရမှာပါ...
ခုတော့ သူတို့က မြို့ပရိတ်သတ်က သူတို့ ခိုးချတာသိလို့မကြည့်လဲ .. နယ်ပရိတ်သတ်ရှိတယ်.. ငါတို့လွယ်လွယ်ပဲဖြစ်သလိုပုံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်.. မြန်မာပြည် လက်ရှိအရေးတွေနဲ့လဲ ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းက ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် မဖြစ်ဘူး.. အထက်က မီဒီယာဆိုတာကို ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်မဖြစ်စေချင်လို့ တမင်ပိတ်ပင်တယ်.. ပိတ်ပင်သင့်တာတွေကျတော့ မပိတ်ပင်ဘူး.. အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ... ရိုက်မယ်ဆိုလဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကိုယ့်အိတ်စိုက်ပြီး ၀ါသနာ စေတနာနဲ့ ရိုက်.. မဟုတ်ရင်တော့.. အနုပညာသမားတွေလဲ တခြားအလုပ်သာ လုပ်စားကြဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်...
တော်လောက်ပြီနော်... ဒီပိုစ့်က ကျမအရင်က ရေးခဲ့တဲ့.. ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းတဲ့ ခိုးချထားသော မြန်မာဇာတ်လမ်းများရဲ့ အဆက်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်... စိတ်ထဲရှိသမျှ အားမရမှု... ဖြစ်စေချင်မှု.. ရှက်မှု.. အားကျမှု... ဂရုဏာဒေါသ.. စေတနာ... တွေပေါင်းပြီး ရေးချလိုက်မိပြီ... တစ်ဦးတစ်ရောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ သဘောအလျင်းမရှိပါ... ကျမခုလိုပြောလိုက်လို့.. ကျမလဲ သူတို့လောက်တောင် သရုပ်မဆောင်တတ်သေးပါ.. သူတို့လောက်တောင် အနုပညာကို မတတ်သေးပါ.. လုပ်ကြည့်လျှင်ခက်မှန်းသိပါသည်... ဒါပေမဲ့ Professional လုပ်နေကြပြီဆိုရင်တော့ ဒိထက် ကောင်းသင့်သည်ဟုထင်ပါသည်... ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနှင့် ခံစားရသည်များကို ဖွင့်အန်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်... မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောကကြီး အဆင့်တန်းမှီရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်............................
Posted by mabaydar at 6:23 PM
Labels: မုန်တိုင်း , ဝေဖန်ရေး
နင်ကိုက သွားကြည့်တာကိုး..။ မြန်မာကားကို ယုံယုံကြည်ကြည် ကြည့်တာကိုက ကြည့်သူ အပြစ်.. ဟတ်ဟတ်။ ငါပီပြင်အောင် ရိုက်ပေးမယ် ဒါရိုက်တာ ဖြစ်မှ..။ ကြောက်လွန်းလို့ နှပ်နှပ်တွေကော ၊ ရှူးရှူးတွေကော၊ မျက်ရည်တွေကော အကုန်ထွက်၊ တခါထဲ နှလုံးရပ်ပြီး သေသွားမယ် သဲထိတ်ရင်ဖိုကား ရိုက်ပစ်မယ်။.. :P
ကျွန်တော်လဲ အခွင့်ရရင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ လုပ်ကြည့်ချင်သဗျ။ အောင်ကိုလတ်လိုပေါ့ ..ရိုက်ချက်လန်းလန်းလေးတွေ ရိုက်ချင်တယ်။ အဟိ။ မဗေဒါ ဘယ်မှာလေ့လာသလဲဗျ။
12/12/2008 9:45 PM
တော်မီတောင် ဒါရိုက်တာဖြစ်ချင်တယ်..ဇာတ်လမ်းလေးတွေတောင် စဉ်းစားမိတယ်..အစကတော့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဒေါ်ယောက်ကျာ်းကို ပြောမလို့..နောက်တော့ သူကပဲ အဲလိုမျိုး ခပ်ဆင်ဆင်ဇာတ်လမ်းလေးရိုက်နေတော့ မပြောတော့ပါဘူး..ဟီးဟီး..မဗေဒါလဲ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးရှိရင်ပြောနော်..ပြောပေးမယ်..
တ်ာမီလဲ မဗေဒါပြောတဲ့မြန်မာကားတွေ အကုန်ကြည့်ပြီးပြီ
ခု လောလောဆယ် အရှားပါးဆုံး လည်းဖြစ်နေပြန်တယ်..
မြန်မာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ကို ဝေဖန်ဖို့ ထပ်တိုက်တွန်းချင်သေးတယ်..
ခုပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ပလော်ဖက်ဆာ မဗေဒါကြီး.. သရဲကားရိုက်တော့မယ်ဆို ခေါ်စမ်းဘာ.. ကျနော် သရဲမင်းသားကြီးလုပ်ချင်လို့း)။... ဒါပေမယ့် Blaze လိုမျိုး ချချင်တာနော်.. ဟင်း..ဟင်း..။
12/13/2008 6:12 AM
တော်တော်နိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နိုင်တဲ့ ဝေဖန်ရေးပါ...။ လေးစားပါ၏.။
12/13/2008 4:18 PM
So true.... Myanmar movie... take longer time to download, But not worth to wait and watch...
u can become the first burmese film critic blogger.. u noe.. we don't have it yet.. thanx for the link.. :)
I should mention thatavideo with Lwin Moe and Khine Thin Kyi copied My Girl. I wrote about it blog beforealong time ago.
်အဲဒီ နေကြတ်ချိန် ဆိုတဲ့ ကားကတော့ပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး..ငါကကိုးရီးယားကားမကြည့်ခင်အဲ့ကားအရင်ကြည့်မိတာ..ပြီးတောင်မပြီးလိုက်ပါဘူး..မင်းသမီးရဲ့အမူအရာကိုစိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ အပြီးထိတောင်မကြည့်ဘူး... နင်ပြောမှပဲ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်..ဟုတ်ပ အဲဒီမိန်းမ ကုန်းကုန်းအော်တာ.. တော်ပါပေတယ် မဗေဒါရေ..ဝေဖန်ထားလိုက်တာများဆိုတာနိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ်..lol.. You didagreat job by criticizing those cheap burmese movies just based on facts and I have to say that it is very practical and informative. =)
ဒါရိုက်တာ နဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အသုံးမကျဘူးပြောချင်တာလား
မြန်မာကား ကြည့်ပါနဲ့ လား..
1/11/2009 1:01 AM
မြန်မာကား စစ်စစ်တွေက အရမ်းကြည်.လို.ကောင်းပါတယ်မဗေဒါ, ဥပမာ; ပန်းမြိုင်လည်ကဥယျာဉ်မှူး.....
ရှေးကကားတွေလည်းရှိပါတယ်ကောင်းတာ နာမည်တွေအကုန်မပြောတော.ဘူး.video တွေကတော.Alex ဆိုသွားသလိုပဲ ၃ ရက် ၁ ကားရိုက်ထားတာဆိုတော. အင်း . ကြည်.ကိုကြည်.တော.ဘူး
6/11/2009 4:49 PM